श्रमिकका सपना : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार श्रमिकका सपना
नेपालको श्रमिक आन्दोलनको झन्डै लगभग ७३ वर्षको इतिहास विराटनगरको जुटमिलबाट सुरु भएको पाइन्छ । पुरानो उद्योग जहाँ नेपालको परिवर्तनका दुई नेताको कार्यस्थल पनि भनिन्छ । परिवर्तनका संवाहक नेपाली श्रमिक प्रशिक्षित हुँदै आए, राणाशासनविरुद्ध जमेर उत्रिए । फलस्वरूप व्यवस्था परिवर्तन भयो । श्रमिकका अवस्था परिवर्तन भएन । अन्ततः यो क्रम १७ सालसम्म केही परिवर्तन भए । केही कलकारखाना खुले पनि । श्रमिक संख्यात्मक रूपमा बढे । रोजगारीमा वृद्धि भयो । तर, बुँदागत रूपमा श्रमिकका उपलब्धि पाइँदैन । १५ सालमा ठूलै परिवर्तन भयो । नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइको सरकार गठन ग¥यो । तर, दिगो हुन सकेन । राजा र कांग्रेसबीचको राजनीतिक खिचातानीमा रुमल्लियो । श्रमिक प्रयोग भए ताŒिवक उपलब्धि देखिएन ।
तत्पश्चात् राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव गरे । दुई छिमेकीसँग मात्र निर्भर भएनन्, तेस्रो मुलुक तत्कालीन सोभियत युनियन र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै विभिन्न नयाँ उद्योग, कलकारखाना, कृषि औजार, चिनी मिल, टायल कारखानालगायत विविध उद्योग खोलेर विकास निर्माणलागायत नेपालको विकासका साथै नेपाली कामदारलाई विदेशमा तालिम प्रशिक्षण गराई एकसाथ अगाडि बढाउँदै नेपालमै रोजगारीको प्रवद्र्धन गरी आत्मनिर्भर गराउँदै लगे । यसरी २७ सालसम्म द्रुतगति मा नेपालको श्रम बजारले फराकिलो बनाउँदै लैजाने क्रममा राजा महेन्द्रको देहावसानले पूर्णविराम लियो ।
तत्पश्चात् राजा वीरेन्द्रको शासनकाल प्रारम्भ भयो । यो ट्रान्जिस्नल समयमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टले मजदुरलाई दुई खेमामा राखी आआफ्नै ढंगबाट मजदुर भनेका समाजवाद र साम्यवादका अनुयायी हुन् भनी भ्रमित पारी प्रशिक्षित गराए । फलस्वरूप ४६ साल निम्तियो । हजारौं मजदुर सडकमा उतारियो । फगत सपनामै परिणत भयो । कांग्रेस र कम्युनिस्ट विधिवत् रूपमा छुट्टाछुट्टै महासंघ दर्ता भए । विभाजित मजदुर पुनः राजनीतिक पार्टीका वर्गीय संगठनका रूपमा परिणत भए एकले अर्काको अस्तित्व नस्विकार्ने भए । सन्दर्भ के देखियो भने पञ्चायतको शासकले गरेका काम संस्थागत नहुँदा परिवर्तनका नाममा श्रमिकका इच्छा र आकांक्षा जहीँको तही रह्यो । अन्ततः सत्ताको खिचातानीमा कांग्रेस कम्युनिस्ट अलमलिँदा छिमेकीले पनि नेपालको उद्योग तथा कलकारखाना सकिदियो ।
आफ्नो उत्पादनलाई नेपाली बजार प्रयोग भए कौडीको भाउमा निजीकरण बनाइयो भने माओवादी जन्मियो । शृंखलाबद्ध रूपमा श्रमबजार स्खलित हुँदै गयो । यो राजनीतिक अकर्मन्यताको उपज थियो । उद्योग बन्द हुन थाले । नेपाली कामदार विदेशिन बाध्य भए । उदाहरणका रूपमा नेपालका क्यासिनो छन् । लगभग आठ क्यासिनोमा ७ हजार कामदार र चारजना न्यूनतम आश्रित परिवार बिचल्लीमा परे । यीजस्तै सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगसमेत प्रभावित भए । लाखौं श्रमिक बिदेसिन बाध्य भए भने नेपालमा रहेका मजदुरलाई बन्दुक बोकाउन लगाइयो ।
परनिर्भर हैन, आत्मनिर्भर हुनका लागि नयाँ शिराबाट सम्भावनालाई नियालौं
परिणामतः हजारौंले ज्यान गुमाए, बचेकाले काम पाएनन् । झन् बिदेसिने क्रम बढ्यो । १० वर्ष माओवादी आन्दोलन २०६२-६३ मा आएर शान्ति सम्झौतामा अन्त्य भयो । हजारांै मजदुरका सपना त्यसपछि पनि जहीँका तहीँ रहे । युवा मजदुर विकल्प नदेखेपछि बाहिरिने क्रम तीव्र हुँदै गयो । देशमा विकल्पमा आम्दानीका स्रोत केही देखिएन । केवल देश रेमिट्यान्समा भर पर्ने नै भयो । तिनै रेमिट्यान्स ल्याउने श्रमिक आज कोरोनाबाट प्रताडित छन् । नेपाल आउन पाउभन्दा सुनाइ छैन । स्वदेश ल्याउँदा महामारी झन् फैलने अभिव्यक्ति आउँदा कस्तो हुन्छ । ती श्रमिकका इच्छा र आकांक्षा ? धन्य छ, ७३ वर्षको नेपाली श्रमिकका सपना आश्वासन, समाजवाद र साम्यवादको परिणतिले उडायो सपना सबै हुरीले ।
अब एउटै विकल्प संवद्र्धनवादको छातामुिन गोलबन्ध होआंै ।
अहिले विश्वभरि कोरोना भाइरस फैलिरहँदा हामी नेपाली श्रमिक देशभित्र र बाहिर कतिको सुरक्षित रह्यौं त ? राज्यको भूमिका कस्तो रह्यो ? यो अध्ययनको विषय हो । त्यसैले, भोलिका दिनमा अब परनिर्भर हैन, आत्मानिर्भर हुनका लागि हामीसँग प्रचुर सम्भावना छन् । एकपटक नयाँ शिराबाट विश्वको एक मात्र राष्ट्र नेपाल विविध आफ्नै कला संस्कृतिले भरिपूर्ण ‘हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराइ’ धेरै देश बनायौं, नेपाली श्रमिकका हातले । अब बेला आएको छ जुटौं, लागौं एकपटक नेपालको श्रम क्षेत्रलाई अगाडि बढाऔं । राष्ट्र, राष्ट्रियताका लागि ‘श्रमजीवी वर्गको एकता, आजको आवश्यकता ।’
(लेखक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)
गुडिरहेको एम्बुलेन्समै त्यागे कोरोना संक्रमितले प्राण
Breaking News Sushila Bishwokarma - August 12, 2020 0
राजविराज । सप्तरीमा कोरोना संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै जिल्लामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको छ । डाक्नेश्वरी नगरपालिका...
कोरोना अस्पताल बनाउने निर्णय कागजमै सिमित
बारा । बारामा कोरोना लागेकाहरुकोे लागि उपचार गर्न भनि अस्पताल बनाउने निर्णय कागजमै सिमित भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद...
खोटाङका चार आगलागी पीडितलाई सहयोग
प्रदेश १ सुर्य तामाङ - March 31, 2021 0
खोटाङ । खोटाङ प्राकृतिक सहयोग कोषले जिल्लाका चार आगलागी पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । पछिल्लो समयमा आगलागीबाट बिस्थापित भएका केपिलासगढी गाउँपालिका–३ बासपानीका...
प्रदेश Dhruba Lamsal - May 23, 2020 0
खेल Dhruba Lamsal - February 15, 2021 0
भर्खरै Kumar Raut - October 10, 2020 0
प्रदेश Dhruba Lamsal - June 3, 2020 0
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रबत्ता डा. विकास देबकोटाले तरकारीबाट कोरोना संक्रमण नहुने बताएका छन् । आज भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले...
प्रकाश आचार्य - April 19, 2021